लगातारको वर्षाले जमीन भासिँदा पर्वतमा जि.स.स. को भवन भत्कियो – Samacharpati
Home » लगातारको वर्षाले जमीन भासिँदा पर्वतमा जि.स.स. को भवन भत्कियो
लगातारको वर्षाले जमीन भासिँदा पर्वतमा जि.स.स. को भवन भत्कियो
प्रकाशित मिति: 2076 आषाढ 8 आइतबार(June 23, 2019) 4:52 PM बजे Posted By:Sunita Karki
पर्वत, ८ असार । लगातारको वर्षाले जमीन भासिँदा जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) पर्वतको भवन भत्किएको छ । जिससको भवनमा रहेको जिल्ला आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका दुई वटा कार्यकक्ष पूर्णरूपमा चर्किएर क्षति पुगेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको विपत् व्यवस्थापन समितिअन्तर्गत सञ्चालनमा आएको जिल्ला आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र बिहान ५ बजेको समयमा जमीन भासिएपछि भत्किएको प्रहरीले जनाएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी चण्डीका गणमा कार्यरत हवल्दार नरबहादुर भण्डारी सुतिरहेको अवस्थामा उक्त भवन भत्किएको हो । भवनबाट धुलो माटो खस्न थालेपछि उठेर हेर्दा भवन चर्किएको र कोल्टे परेको देखेपछि भवन भासिएको पत्ता लागेपछि उक्त स्थानमा रहेका सामान हटाएको भण्डारीले बताउनुभयो ।
पाँच मिनेट मात्र ढिला गरी थाहा भएको भए आफ्नो ज्यानसमेत नरहने उहाँले बताउनुभयो । जिससका प्रमुख मनोहर वि पौडेलले कार्यक्रमका सिलसिलामा दक्षिण पर्वतको हुवासमा रहेकाले के–कति क्षति भयो भन्ने यकिन विवरण जानकारी नभएको बताउनुभयो । उहाँले सोही ठाउँमा समन्वय समितिको पक्की भवन निर्माणका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उक्त भासिएको भवनको निरीक्षण गर्दै कुश्मा नगर प्रमुख रामचन्द्र जोशीले पानीको निकास नभएका कारण पटकपटक यसरी भवन भत्किने, भासिने गरेकाले त्यसको उचित निकासका लागि व्यवस्था गरिने बताउनुभयो ।
जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिमार्फत थप सहयोगका लागि सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गरी दिगो व्यवस्थापन गरिने उहाँको भनाइ छ । जिससको भवन पटकपटक भासिने गरेको छ । विगतमा पनि जिल्ला अनुसन्धान कार्यालय रहेको भवन भासिएको थियो । (रासस)
Tags:7Palika, Arthar Dadakharka, Bachchha, Bahaki Thanti, Bajung, Balakot, Banau, Baskharka, Behulibas, Bhangara, Bhoksing, Bhorle, Bhuk Deurali, Bhuktangle, Bihadi Barachaur, Bihadi Ranipani, Chitre, Chuwa, Deupurkot, Deurali, Devisthan, Dhairing, Durlung, Hosrangdi, Huwas, Karkineta, Katuwa Chaupari, Khola Lakuri, Khurkot, Kurgha, Kushma Municipality, Kyang, Lekhphant, Limithana, Lunkhu Deurali, Mallaj Majhphant, Mudikuwa, Nagliwang, Pakhapani, Pakuwa, Pang, Pangrang, Phalamkhani, Phalebas Devisthan, Phalebas Khanigaun, Pipaltari, Ramja Deurali, Saligram, Salija, Saraukhola, Shankar Pokhari, Shivalaya, Taklak, Tanglekot, Thana Maulo, Thapathana, Thuli Pokhari, Tilahar, Tribeni, Urampokhara, Wahakithanti, आर्थर डाँडाखर्क, उरामपोखरा, कार्किनेटा, कुर्घा, कुश्मा नगरपालिका, क्याङ, खानीगाउँ, खौलालाँकुरी, चित्रे, टकलाक, ठानामौला, ठूलीपोखरी, तिलाहार, त्रिवेणी, थापाठाना, देउपुर, देउराली, देवीस्थान, धाइरिङ, नाङलिवाङ, पाखापानी, पाङराङ, फलामखानी, बनौ, बाच्छा, बाजुङ, बालाकोट, बासखर्क, बाहाकी ठाँटी, बिहादी बर्राचौर, बिहादी रानीपानी, बेहुलीबास, भंगरा, भुक्ताङले, भोक्सिङ, भोर्ले, माझफाँट मल्लाज, मुडिकुवा, राम्जादेउराली, लिमिठाना, लुङ्खुदेउराली, लेकफाट, शंकरपोखरी, शालिग्राम, शालिजा, सरौखोला, हुवास, होश्राङ्दी
मानसिक रुपमा स्वास्थ्य रहन ध्यान दिनुहोस् यस्ता
मखमली मखमलीको फस्ट लुक्स रिलिज
सी चीनफिङको नेपाल र चीनको झण्डा हल्लाएर